Ekpere ike, maka ịdị n’otu nke ndị mmadụ, ngọzi, ka anyị kpee ekpere maka ezinụlọ niile nke ụwa … – JucelinoLuz
Ekpere ike, maka ịdị n’otu nke ndị mmadụ, ngọzi, ka anyị kpee ekpere maka ezinụlọ niile nke ụwa …
“Anyị ga-enwe 2022 juputara na mmezu, ụbara, ahụike, udo, obi ụtọ …”
Site na 6:00 mgbede ruo 7:00 ehihie Brasília – Brazil
Sayensị na-ekwu na mmiri bụ otu n’ime ndị bụ́ isi na-eduzi ume nke dị, ndị mmụọ na-akụzi na, ya mere, ha na-eji ya na-ebunye ndị ọrịa ume ha chọrọ, iji nweta ahụ efe pụọ n’ihe mgbu anụ ahụ́ na nke ime mmụọ ha. Ọ bụ mmiri mmiri nke ndị enyemaka ime mmụọ na-ahọrọ ịwụsa mmiri magnetized ha. Ọ bụ n’ime mmiri ka a pụrụ ibipụta ọgwụ ime mmụọ.
Kwa afọ e nwere ihe karịrị nde mmadụ 40, na-achọ ime ọchịchọ, na-enweta ume, ekpere, na-etinye aha ha n’elu ebe ịchụàjà nke divinity na anyị ga-eme ekpere na ume mmiri. Ndụ na-etinye anyị ọtụtụ ihe mgbochi kwa ụbọchị. Ogwu ndị a na-atụgharịkarị anya anyị n’ihe dị anyị mkpa n’ezie, ma ọ bụrụ na anyị elee anya n’ihu ma nọgide na-ahụ nrọ anyị n’ebe dị anya, ihe anyị chọrọ iru bụ n’ihi na ihe mgbochi a ezughị ezu ime ka anyị daa mbà!
Anyị kwesịrị ịna-elekwasị anya n’ihe anyị chọrọ ime, anyị kwesịrị ịna-elekwasị anya n’ezi ihe, ihe na-ewusi anyị ike, ihe na-agba anyị ume ka anyị na-aga n’ihu, ọ bụrụgodị na anyị echee na anyị enwekwaghị ike. Maka ndị na-arọ nrọ, ịkwụsị agaghị abụ nhọrọ.
Na ọrụ na ọrụ ndị a na-arụ n’aha mmadụ, na-eme ka anyị dịkwuo ike, n’ihi na mgbe anyị chere na anyị enweghị ike ịga n’ihu, ndị ọrụ ibe anyị na-enyere anyị aka ile anya n’ihu, na-egosikwa anyị ọzọ ụzọ anyị kwesịrị ịgbaso. Site na ezi ekpere na ume, anyị anaghị efu n’ime ọzara, ọ bụ njikọ na-eme ka anyị dị ike na-eme ka anyị sie ike na mmezu anyị!
Agbamume kachasi anyị obi bụ na ọ ga-abụkwa afọ ojuju anyị na-enwe mgbe anyị jikwaa imeri ihe mgbochi niile iji ruo ebe anyị chọrọ, na nkwanye ùgwù, ịdị n’otu na mmụọ nke ike na-adịgide adịgide iji nabata na inyere mmadụ aka!
Ekpere maka mmadụ ma nabata onye ọ bụla!
Debanye aha ugbu a! Bịa bụrụ akụkụ nke nnukwu ezinụlọ ime mmụọ a.
Ziga ebumnuche gị na: EQUIPEJNL@GMAIL.COM
IHE Ị GA-EME: Zipụ aha zuru ezu, nke onye (s), ezinụlọ iji nye ekpere gị na ebumnuche gị maka Eluigwe na Ala (Chineke gị) ịrịọchite ọnụ na ndụ gị! N’ụbọchị ahụ, tinye otu iko mmiri ma ọ bụ karama mmiri ruo ọgwụgwụ nke ekpere, mgbe ahụ enwere ike iri ya.
Prof. Jucelino Luz – Onye Ndụmọdụ Ime Mmụọ
Kev thov Vajtswv muaj zog, rau kev sib sau ntawm tib neeg, koob hmoov, cia peb thov Vajtswv rau txhua tsev neeg hauv ntiaj teb …
ענערגעטיק געבעט , פאר דער אחדות פון פעלקער , ברכות , לאמיר דאווענען פאר אלע משפחות פון דער וועלט …